Babangiselwani umzila wabo? | Isolezwe
Babangiselwani umzila wabo?
Isolezwe / 31 May 2012, 07:43am / STHEMBISO SHANGASE
AKE sigwedlele eceleni sishaye ama-hazard ethu silungiselele ukubuyela eceleni ukuze sixoxe nazi ezithinta thina bomathandizinto ezidumayo.
Awanamhlanje ama-hazard angifica ngishosholoza ngomgwaqo osuka eMndeni, eSoweto, ngibheke ngaseZone 6 nginqamula ngaseMaponya ngize ngizophumela eChris Hani Baragwanath Hospital, eMjibha.
Ngisavalelwe wujenga lwezimoto ngibone memfu ezinye izimoto zidlule zishosholoza ngomzila wamabhasi obomvu ongakwesokudla. Angithandi ukubuza ukuthi ikhanda lalo muntu owahlela le yanto ye BRT wayecabangeni impela ethatha isitobhi sebhasi ayosibhadlaza phakathi nomgwaqo. Manje abagibeli sebevika izimoto ezingenasikhathi sokubalinda uma sebewela umgwaqo.
Kodwa nakhu la ngiqonde khona, kuwo lowo mnyama uthola sekunezimoto ezincane esezibangisa la mabhasi kulo mzila wawo kuphela.
Le nto ingikhumbuze into engijwayele ukuyibona eThekwini kulo mzila wezithuthi zomphakathi obomvu. Njalo ekuseni ngijwayele ukubona sekuminyene utshumo izimoto ezincane sezibangisa amatekisi namabhasi bese ugcina usudideka ukuthi abantu abahamba ngezimoto ezincane abahlala bekhala ngokuthi amabhasi namatekisi ayinkinga emgwaqweni yakule lizwe sekuyibona manje abayobangisa zona kanye lezi zithuthi abazibona njengesiphazamiso emgwaqweni. Ngeke ngisho lutho ngesiminyaminya esidaleka uma amatekisi namabhasi esesuka kulo mzila wawo osohlangothini lokugcina kwesokudla, esechezukela ukwehlisa abagibeli ngakwesobunxele.
Iningi lethu bashayeli liyathanda ukubona amaphutha okushayela kabi likhohlwe wukuzibheka nalo ukuthi limsulwa kangakanani. Abashayeli abanqeni ukubanga umsindo ngama- hooter bebe bebona ukuthi imoto ephambi kwabo ifile noma ihamba umuntu ofundayo ukwenza nje isibonelo.
Sengiyafisa ukwazi ukuthi bahlawuliswa kanjani abantu abatholakala beshosholoza ngomzila okungesiwo owalolo hlobo lwezimoto. Nalaba abathanda ukupaka izimoto zabo endaweni yabaphila nokukhubazeka bebe bengakhubazekile kusafanele bathathelwe izinyathelo.
Hhayi-bo sengilibele ukulanda, kukude eThekwini ngiseMjibha yithi sicishe ama- hazard ethu sibophe amabhande sishayele ngobukhulu ubunono ngokulandela imithetho yezokushayela kule lizwe size sihlangane sisaphephile nangesonto elizayo kuyona le ngosi yezezimoto.Yimi owenu.